इजि क्विच रेसिपी - व्यंजनहरु
टुना क्यासरलको साथ के खान गर्ने
तपाईं कसरी एक पकाएको ह्याम पुनः गरम गर्नुहुन्छ
पालक र आटिचोक डुबकी रोटी कचौरा
कोलार्ड साग के रुचि छ
बेकन र भिनेगरको साथ कालो sauteed
इजि क्विच रेसिपी
यो इजि क्विच रेसिपी प्रिमेड पाई क्रस्टबाट सुरू हुन्छ तर कसैलाई थाहा छैन! यो हेम, चीज र हरियो प्याजले भरिएको छ र उत्तम सजिलो ब्रेकफास्ट वा डिनर हो!
तपाईले चाहानु भएको कुरा सजिलो केहि पनी बनाउन सक्नुहुन्छ - अन्य तरकारीहरू, विभिन्न चीजहरू वा मसलाका चीजहरू - तर ह्याम र चीज हामीलाई यसको मनपर्दो तरिका हो। मलाई तिम्रो बारेमा थाहा छैन, तर हामी प्रेम गर्दछौं अण्डा दिन को कुनै पनि खाना को लागी यहाँ छ। हामी उनीहरूलाई बिहानको खाजा, खाजा वा डिनरको आनन्द लिन कुनै न कुनै बहाना लिनेछौं, र यो सजिलो पदार्थ बनाउने विधिले पक्कै पनि तीनैहरू बिचको अन्तर कम गर्छ। मलाई मेरो क्विच रेसिपीहरू सजिलोसँग राख्न, र उनीहरूको मनमोहक सेवाको साथ मनपर्दछ फल वा एक सुन्दर ताजा सलाद !
ब्रन्चको लागि अण्डाहरू
यदि तपाईले हामीलाई अन्धकार माया गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो मनपर्न सक्छ रातारात ब्रेकफास्ट कासरोल बेकनको साथ वा यो मेक्सिकन स्लो कुकर ब्रेकफास्ट
त्यहाँ क्लासिक क्विच रेसिपीमा धेरै भिन्नताहरू छन्, तर मँ यस समयमा चीजहरू अति सरल राख्न चाहान्छु। हामी एक पूर्वनिर्मित, फ्रिज पाइप क्रस्टको साथ शुरू गर्दैछौं र यसलाई सबै राम्रा चीजहरूले भर्दछौं!
तपाईं निश्चित रूपमा प्रिमेड, फ्रिज पाई क्रस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन डिस्पोजेबल प्यानमा पहिले नै थिचेको छ यदि तपाईं यस चीजलाई अझ सजिलो बनाउन चाहानुहुन्छ, तर म मेरो रोल आउट गर्न चाहन्छु र यसलाई आफ्नै पाई प्लेटहरूमा बेक गर्न चाहन्छु। त्यस तरीकाले कसैलाई पनि हामीले लिने सर्टकटहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्दैन!
तातो कुकुरको चटनी ग्राउड गोमांसको साथ
यो सजिलो Quiche Recipe बनाउनका लागि सुझावहरू:
यो नुस्खा वास्तव मा कुनै सजिलो हुन सक्दैन - एक को साथ शुरू गर्नुहोस् प्रिमेड पाई क्रस्ट , र यसलाई तपाईंको मनपर्ने चीजहरू, साथै केही अण्डाहरू र दूधले भर्नुहोस्।
धेरै क्विच रेसिपीहरू तपाइँले पाउनुहुनेछ पूर्वानुधारित सामग्रीहरू र थप प्यान थप थप तयारी समय आवश्यक पर्दछ। हामी पकाएको, क्युब ह्याम र हरियो प्याजको प्रयोग गर्दै यस रेसिपीमा यो सजिलो बिहानको खाजा निश्चित गर्न को लागी पनी एक साथ सम्भव भएसम्म चाँडो आउँदछ!
क्विचमा बेक हुने बित्तिकै हेराइलाई नबिर्सनुहोस् - अण्डाहरूले पकाएको जस्तो तपाईं क्रस्ट पनि माथि खैरो भएको चाहनुहुन्न! यदि आवश्यक छ भने, क्रस्टको बाहिरी औंठीलाई कभर गर्नुहोस् पन्नी को एक बिट संग यसलाई थप ब्राउनिंगबाट रोक्नको लागि।
यदि तपाईं परम्परागत पाई क्रस्टको प्रशंसक हुनुहुन्न भने, बनाउने प्रयास गर्नुहोस् पफ पेस्ट्री क्विच वा यी Easy Mini Quiche Wonton रैपरको साथ बनेको!
के तपाईं समय भन्दा अगाडि नै क्वाइच बनाउन सक्नुहुन्छ?
तपाईं शर्त! एक पटक बेक्ड भएपछि, काउन्टरमा दुई घण्टाको लागि टाँस्नुहोस्, र त्यसपछि फ्रिज गर्नुहोस्। पुनः गरम गर्न, Quilhe लाई पन्नीले छोप्नुहोस् र 32२5 एफ मा बेक गर्नुहोस् (भर्खर गरम नभएसम्म)। रेफ्रिजरेटि before गर्नु भन्दा पहिले यसलाई चिसो पार्दा क्रस्टलाई अलि अलि बढी क्रिस्पिर राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाइँ क्रस्टलेस Quiche कसरी गर्नुहुन्छ?
यदि तपाईं ग्लुटन-रहित विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, वा तपाईं क्रस्टको ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्न (अरे, हामी सबैको आफ्नै प्राथमिकता छ!), तपाईं पूर्ण रूपमा क्रस्टलाई छोड्न सक्नुहुन्छ र अण्डाको मिश्रण मात्र ठीक ठाउँमा खसाल्न सक्नुहुन्छ। पन क्रसलेस क्रिचीज पनीर बनाउनका लागि। यो सजिलो छ!
केवल पाइ प्लेट पहिले ग्रीस गर्न नबिर्सनुहोस् किनभने अण्डाहरू पकाए पछि बाहिर जान गाह्रो हुन्छ।
किनकि तपाईंले डोनेसका लक्षणहरूको लागि क्रस्ट अवलोकन गर्नु आवश्यक पर्दैन, अण्डाहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रमा नबढुन्जेल तपाईंले क्रस्टलेस कोच बनाउनु पर्छ।
अधिक BREAK रसीदहरु तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ
रातभरि ब्रेकफास्ट क्यासरोल ससेजको साथ - एक हात तल परिवार मनपर्ने!
ब्लूबेरी बेक्ड ओटमील - एक स्वस्थ, मिठाई विकल्प
केरा ब्रेकफास्ट कुकीज - द गो मा नास्ताको लागि
रातभरि फ्रिज दलिया
केरा नट क्रन्च मफिनहरू - मिमी, मफिनहरू !!
तयारी समयपन्ध्र मिनेट कुक समय35 मिनेट कुल समयपचास मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकएशले फेहर यो इजि क्विच रेसिपी प्रिमेड पाई क्रस्टबाट सुरू हुन्छ तर कसैलाई थाहा छैन! यो हेम, चीज र हरियो प्याजले भरिएको छ र उत्तम सजिलो बिहानको खाजा वा डिनर हो! तपाईलाई सजिलो केहि पनी चाहानुहुन्छ यो सजिलो Quiche Recipe - अन्य तरकारीहरु, बिभिन्न चीजहरू वा मौसममा।
▢१ फ्रिज पाइप क्रस्ट
▢6 ठुलो अण्डा
▢¾ कप दूध वा क्रीम
▢¾ चम्मच नुन
▢१ कप पकाएको ह्याम काटिएको
▢१ ½ कप काटिएको चीज विभाजित
▢। चम्मच हरियो प्याज
ओभरलाई5Pre° डिग्री फारेनहाटमा राखिन्छ।
अन क्रिस्ट गर्नुहोस् पाई क्रस्ट गर्नुहोस् र '' पाई प्लेटमा थिच्नुहोस्, यदि चाहिएको छ भने शीर्ष किनाराहरू क्रिम्पि। गर्नुहोस्।
ठूलो कटोरामा, अण्डाहरू, दूध, नुन र कालो मिर्च सँगै व्हिस्क गर्नुहोस्।
हेम, १ कप चीज, र हरियो प्याजलाई पाई क्रस्टमा छिर्नुहोस् र शीर्षमा अण्डाको मिश्रण खन्याउनुहोस्। बाँकी ½ कप चीज चीज अण्डको मिश्रणको शीर्षमा छर्कनुहोस्।
केन्द्र पूर्ण रूपमा सेट नभएसम्म for 35-40० मिनेट को लागी बेक गर्नुहोस्। कटाई र सेवार गर्नु अघि -10-१० मिनेटको लागि चिसो दिनुहोस्।
क्यालोरिज:२ 9,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:पन्ध्रg,मोटो:१g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:१ 190 ०मिलीग्राम,सोडियम:705मिलीग्राम,पोटासियम:१77मिलीग्राम,चिनी:दुईg,भिटामिन ए:5०5IU,भिटामिन सी:०..6मिलीग्राम,क्यालसियम:२०8मिलीग्राम,फलाम:१.7मिलीग्राम
कीवर्डसजिलो Quiche नुस्खा कोर्सब्रेकफास्ट पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सामाजिक मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
यस सुपर ब्रेकफास्ट रेसिपीलाई रिपेन गर्नुहोस्
हावा fryer मा ताजा हरियो बीन्स
अधिक प्राप्त गर्नुहोस् तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ
अगाडि अण्डा मफिनहरू बनाउनुहोस्
बिस्कुट र ग्रेवी